आयोगको निर्णय सकारात्मक मानेका नेकपाका दुबै समूहको आ–आफ्नै व्याख्या ! (भिडियो) « News24 : Premium News Channel
आयोगको निर्णय सकारात्मक मानेका नेकपाका दुबै समूहको आ–आफ्नै व्याख्या ! (भिडियो)
काठमाडौं, १२ माघ । विभाजित बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बारे निर्वाचन आयोगले दुबै समूहलाई आधिकारिक मानेन । यसले पुनः तरंग उत्पन्न गरेको छ ।
आयोगले दुबै समूहले स्पष्ट सन्तुष्ट हुने जवाफ नदिएकाले ऐन, कानून र पार्टीको विधान अनुसार नेकपा एउटै दल भएको प्रष्ट भनेको छ । यसमा दुबै दलका नेताहरुले सकारात्मक टिप्पणी गरेका छन् । टिप्पणी यो अर्थमा आएको छ, उनीहरुले मूलभूत रुपमा आफ्नै समूहलाई आधिकारिक मानेको व्याख्या गरेका छन् ।
के नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी फुटेको छैन रु अहिले पुनः यो प्रश्न उठेको छ । व्यवहारिकरुपमा भन्ने हो भने नेकपा दुई चिरा भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको एउटा समूह छुट्टै दलको अभ्यासमा छ भने अर्को समूह प्रचण्ड–माधव नेपाल अध्यक्ष रहेको अर्को समूह पनि भिन्न दलका रुपमा छ ।
दुबै समूहले अघोषित रुपमा आ–आफ्नो कार्यालय बनाएका छन् । ओली समूहले धुम्वाराहीमा रहेको कार्यालयबाट आफ्नो गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ । अर्कोतिर प्रचण्ड–नेपाल समूहले कोटेश्वर पेरिसडाँडामा रहेको पार्टी कार्यालयलाई आफ्नो नियमित कार्यालयको रुपमा स्थापित गरेको छ ।
ओली समूहले प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा भेला, बैठक, जनसभासम्म गर्दै आएको छ । केन्द्र्रीय कमिटी होस् वा स्थायी कमिटी, सचिवालय बैठक नै किननहोस् छुट्टै गर्दै आएको छ । प्रादेशिक भेला मात्र होइन, स्थानीय भेला पनि यो समूहले तीव्र पारेको छ । त्यस्तै प्रचण्ड–नेपाल समूहले पनि केन्द्रीय कमिटी बैठकदेखि स्थायी कमिटी, सचिवालय बैठक तथा भेलाहरुलाई निरन्तरता दिएको छ ।
यो समूह ओलीको प्रतिनिधिसभ विघटन गर्ने मुद्दामा सडक आन्दोलनमै उत्रिएकोछ । व्यवहारिकरुपमा भिन्न क्रियाकलाप गर्दै आएका यी दुई समूहलाई निर्वाचन आयोगले भने ऐन÷कानून र पार्टीको विधान अनुसार एउटै दलका रुपमा चिनिने बताइदियो । उसले तर्क राखेको छ–नेकपाका दुबै समूहले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार आधिकारिक दाबी गर्ने पहल गरेनन् ।
मात्र दफा ५१ अनुसारको पार्टी निर्णयहरुमात्र बुझाएका छन् । यसले दुई दलको रुपमा व्याख्या गर्न पर्याप्त प्रमाण र विधान अनुसार मेल खाँदैन । निर्वाचन आयोगको यो निर्णयपछि दुबै समूहका नेताहरुले सकारात्मक नै मानेका छन् । प्रचण्ड–नेपाल समूहका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आयोगले गरेको निर्णय अनुसार ४ सय ४१ केन्द्रीय कमिटी नै आधिकारिक भएकाले आफूहरुको बहुमत पुगेको बताए । उनले यही आधारमा आयोगको निर्णयलाई सकारात्मक मानेका छन् ।
अर्कोतिर नेकपा ओली समूहले पनि आयोगको निर्णयलाई सकारात्मक मानेको छ । यो समूहका नेता इश्वर पोखरेलले आयोगको निर्णयले पार्टी फुटाउनेलाई नै धक्का परेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यदि निर्वाचन हुने अवस्था आएमा अहिलेकै अवस्थामा नेकपा एउटै भएर निर्वाचनमा जानुपर्नेछ । यदि दुई समूह बने दुबैले सूर्य चिन्ह र पार्टीको नाम पाउँदैनन् । त्यस्तो अवस्थामा सूर्य चिन्ह फ्रिज हुन्छ ।